Jacking Sistimu Inogadzira | Yakakwira mhando & yepamusoro tekinoroji - Yakave-Simba
Aya marongero ehurongwa hwejacking kana marongero anogona kuvakwa-mune akawanda mafomati nekushandisa bevel gearboxes, mota, kudzikisa mabhokisi, magiya ekutyaira, coupling, plummer mabhuroko uye ekudzora ekufambisa michina.
Zvine zveakakura masisitimu masisitimu angave ari 'H', 'U', 'T' uye 'Ini' ndakagadzirisa masisitimu e jacking. Cherekedza kuti akawanda screw jacks anogona kubatanidzwa pamwechete robhoti kana magetsi. Yechipiri inobatsira kana pasina nzvimbo yekubatanidza dhiraivha shafts.
H-Kugadziridza Jacking System
I-Kugadziridza Jacking System
T-Kugadziridza Jacking System
U-Kugadziridza Jacking System
Mashandiro anoita Jacking System
Chinhu chejack jack chigadzirwa ndipo panoshandirwa sikuru jack mu symphony kuti uwane mutsetse wekufamba. Iyo screw jack system kurongeka inogona zvakare kuve inozivikanwa se "jacking system".
Mukana wekubatanidza robhoti sikuru jeketi pamwe chete kuti vatamise symphony iri pakati pezvakanaka kwazvo. Zvirongwa zvakajairika zvinosanganisira screw jacks, bevel gear mabhokisi, mota, kudzikisa mabhokisi emagetsi, shafts yekutyaira, coupling uye plummer block.
Jacking Systems ine mbiri yekutanga maficha:
Vanobvumidza iko kufamba kwemitoro mikuru inotyairwa nemota imwechete eg 4 x ME18100 sikuru jeki dzakarongedzwa mukati mechikanda jack system inogona kufambisa yakawanda ye400 Te (4000kN).
Tsigiro inoremerwa zvakaenzana kupfuura nzvimbo yakati rebei eg 20Te inoremedza kupfuura 24m2 nharaunda ichishandisa ina sikuru jeki ine 6m x 4m yepakati nzvimbo.
Kazhinji jacking masisitimu akasunganidzwa zvine hungwaru pakati pechinhu chimwe nechimwe chinotyairwa mukati mechirongwa. Zvisinei masisitimu akabatanidzwa manhamba anogona kuwanikwa. Pakati peaya masisitimu ejack screws ari ega mota nemagetsi uye akawiriraniswa neyemagetsi control system uye yakavharwa mhinduro loop. Izvi zvinogona zvakare kuwedzeredzwa kuve nechokwadi chekuti akawanda marobhoti akabatana jacking masystem akawiriraniswa / akadzorwa manhamba achibvumira yakatwasuka mitsetse yekufamba nzira kuti uwane zvinopihwa pane hombe chiyero.
Yakave yakabvumidza Power Jacks kuendesa jacking system mhinduro mumatunhu mazhinji. Kugadzirwa kwemhando dzenzvimbo kungave mune yesimbi, eruzhinji, mota, bepa kana simba vaizove ivo vekutanga vashandisi vejacking masisitimu zvisinei mashandisirwo emuenzaniso nhandare, kutaurirana uye kutsvagirisa zvakare anoshandisa masisitimu ekubairira emadhizaini makuru nediki.
Zvisinei nekushandisa Power Jacks kuve nekunzwisisa uye ruzivo rwunovimbisa kuti vatengi vanozowana yakanyanya kunaka jacking system mhinduro.